Mandalay Trend 145
ဇာတ်လမ်း၊ ရုပ်ရှင်ဆိုတာ လူတွေရဲ့ နေ့စဉ်ဖြစ်ပျက်နေတဲ့ အကြောင်းအရာတွေကို သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ ဇာတ်လမ်း၊ ဇာတ်အိမ်နဲ့ တည်ဆောက်ထားတဲ့ ဘဝတစ်ခုဆိုလည်း မမှားပါဘူး။ ဇာတ်လမ်း အမျိုးမျိုးရှိသလို ခံစားမှု ရသအမျိုးမျိုးပေးစွမ်းနိုင်တဲ့ ရုပ်ရှင်တွေကလည်း ကြည့်လို့မကုန် Read full article
by Aung Myo Hein on 11 March, 2021
မတည့်အတူနေ ကြောင်နဲ့ကြွက်ရဲ့ Live Action
ဒီတစ်ခါမှာတော့ စန္ဒယားပညာရှင်ကြီးဖြစ်ချင်နေတဲ့ တွမ်နဲ့ ဇိမ်ကျကျအိမ်အကောင်းစားကြီး တစ်လုံးလိုချင်နေတဲ့ ဂျယ်ရီတို့ကို Read full article
by Aung Myo Hein on 09 March, 2021
ပါးစပ်မစိမိအောင်ရီနေရမယ့် Steven Chow ရဲ့ Fight Back To School Triology
ချောင်ရဲ့ဇာတ်ကားတွေထဲမှာ ဒီ Fight Back T S Series က လူသိအများဆုံး နှင့် အခုဆို လူတိုင်းကြည့်ပြီးသား စီးရီး ဖြစ်ပါတယ်။ Read full article
Godzilla Vs. Kong မှာ Godzilla နိုင်မယ်ဆိုတာ ‌သေချာပြီလား?
Godzillaနဲ့ Kong ဆိုတာက ပရိတ်သတ်တွေကြားမှာ နာမည်ကြီး ရေပန်းစားတဲ့ ဇာတ်ကောင် (၂) ကောင်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုဇာတ်ကောင် (၂) ကောင်က ဇာတ်လမ်းတစ်ခုတည်းမှာ တိုက်ခိုက်ကြလိမ့်မယ်လို့ ဘယ်သူတွေက ထင်မှာလဲ? အခုတော့ တကယ်တိုက်ခိုက်ကြတော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ Read full article
by Aung Myo Hein on 16 January, 2021
Captain America MCU ကိုပြန်လာမှာလား ??
အခုထွက်လာတဲ့ သတင်းတွေအရ Chris Evans ကို Captain America အနေနဲ့ပြန်လည်မြင်ရနိုင်ဖို့ရှိတယ်လို့ Read full article
ဝေဖန်မှုတွေ မြင့်တက်နေတဲ့ Wonder Woman 1984
မကြာသေးခင်ကမှ ပြသထားတဲ့ Wonder Woman 1984 ဟာ DC fan တွေကြားမှာ Read full article
by Aung Myo Hein on 19 December, 2020
လာမယ့် Spider-Man3မှာ Tobey နဲ့ Andrew တို့ရဲ့ Spider-Man တွေပြန်ပါလာမယ်လို့ သတင်းတွေ ထွက်နေခဲ့တာကြာပါပြီ။ Read full article
by Wai Yan Kyaw on 07 December, 2020
မမျှော်လင့်ထားတဲ့ ဇာတ်သိမ်းဖြစ်လာနိုင်တဲ့ Attack on Titanရဲ့ Final Season
(၂၀၁၃)ခုနှစ် (၄)လပိုင်း (၇)ရက်နေ့မှာ Season (1)ရဲ့ Episode (1)ကို စတင်ပြသခဲ့ပြီး Rating 8.8%ထိ ရရှိထားတဲ့ Attack on Titanဇာတ်လမ်းတွဲက ၇နှစ်လောက်ရှိနေတာတောင် ယနေ့အချိန်ထိ ပရိသတ်တွေကြား ရေပန်းစားနေတုန်းပါပဲ။ Read full article
by Aye Myat Thinzar on 30 November, 2020
Start-Up Kdrama ဇာတ်သိမ်းက Webtoon ထဲကအတိုင်း ဖြစ်လာမှာလား???
လက်ရှိမှာ KDrama Fan တွေကြားထဲမှာ အရမ်းကို ဇာတ်ရှိန်တက်နေပြီဖြစ်တဲ့ Start Up ဇာတ်သိမ်းခန်းဟာ ဘယ်လိုအဆုံးသတ် ဖြစ်သွားမှာလဲ??? Read full article
by Win MM Htay on 25 November, 2020
အခုတလော ကိုရီးယားဇာတ်လမ်းတွဲ ချစ်သူတွေအပြင် အပြင်လောက စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင်တွေ၊ ဆယ်လီတွေနဲ့ စွန့်ဦးတီထွင် လုပ်ငန်းရှင်တွေအထိ ပေါက်ရောက်အောင်မြင်နေတဲ့ Read full article
by By Thant Thant on 19 October, 2020
Netflix Original Series တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Emily in Paris ဇာတ်လမ်းလေးက အောက်တိုဘာလ (၂) ရက်နေ့က ထွက်ရှိခဲ့ပြီး ရေပန်းစားလူကြိုက်များတဲ့ ဇာတ်ကားတစ်ကားပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အကောင်းဆုံး ဒါရိုက်တာ တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ Daren Star ရဲ့ ဖန်တီး ရိုက်ကူးချက်တွေနဲ့ ဇာတ်ကားတစ်ကားပါ Read full article
ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနနှင့် မြန်မာနိုင်ငံရုပ်ရှင်အစည်းအရုံးတို့ ပူးပေါင်း၍ အောက်တိုဘာ (၇) ရက်နေ့က လာမည့် (၁၃) ရက်နေ့တွင် ကျရောက်မည့် မြန့်မာ့ရုပ်ရှင် နှစ် (၁၀၀) ပြည့် အခမ်းအနားကို ဂုဏ်ပြုသောအားဖြင့် အွန်လိုင်းရုပ်ရှင်ပွဲတော်ကို အောက်တိုဘာ (၈)ရက်ကနေ Read full article